အခမဲ့7ရက်ရောင်းချသူ hosting - ဒိုမိန်းအမည်များ, ကို web hosting အတွက်နှင့် VPS, ကိုလက်မှတ်များ HdRede.com
Web hosting အစီအစဉ်များ
စီမံကွပ်ကဲ VPS server ကို
အခမဲ့7ရက်ရောင်းချသူ hosting
Hosting များကို ပြန်ရောင်းသူ
သင့်ကိုယ်ပိုင် hosting အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ငွေရှာ hosting ပြန်လည်ရောင်းချသူများ! စမ်းသပ်မှုနောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါ 2nd ရက်သတ္တပတ်ပေးဆောင်စတင်ရန်အဘို့အ Reseller အခမဲ့7ရက် Hosting ။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် hosting ကုမ္ပဏီကိုမည်သို့လွယ်ကူသော, တန်ဖိုးနည်းနှင့်အမြတ်အစွန်းကိုစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည် hosting အ Reseller ကို web သိ. အားဖြင့်!
သင့်ရဲ့ပြန်လည်ရောင်းချသူများကုမ္ပဏီ hosting စတင်ဘယ်လောက်လွယ်ကူတယ်တန်ဖိုးနည်းနှင့်အမြတ်အစွန်းမှာသင်ကတအံ့တသြလိမ့်မည်! ငါတို့ရှိသမျှသည်အကိရိယာများနှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ပြန်လည်ရောင်းချသူများ hosting အစီအစဉ်များကိုသငျသညျ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်, စျေးနှုန်း, packages များနှင့်အင်္ဂါရပ်အောက်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏တစ်ဦးန့်အသတ်အရေအတွက်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုမယ့်အနည်းငယ် minutos.Todos ၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအထောက်အပံ့ပေးလိမ့်မယ်။
HdRede နှင့်အတူပြန်လည်ရောင်းချသူများသင်အမြတ်အစွန်း၏ 100% ရလိမ့်မည်စီစဉ်ထား!
ဘယ်လို Reseller ပေးတဲ့နှင့်ခွဲ ကြောင့်ပြန်ရောင်း
သငျသညျန့်အသတ်ရှိပါတယ်ငှားရမ်းသောအစီအစဉ် အကယ်. သင် WHM ရှိသငျသညျန့်အသတ် hosting အတွက်အကောင့်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ် အကယ်. သင်ကသခင်သင်သည်ခွဲပြန်လည်ရောင်းချသူများ WHM နှင့်န့်အသတ် hosting အတွက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ် အကယ်. သင်အာလဖရှိသငျသညျခွဲပြန်လည်ရောင်းချသူများ Master နှင့် WHM နှင့်န့်အသတ် hosting အတွက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ် အကယ်. သင် Superalpha ရှိသငျသညျခွဲပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့် Alpha Master နှင့် WHM နှင့်န့်အသတ် hosting အတွက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်
whm လက်ခံဆောင်ရွက်ရေး ပြန်လည်ရောင်းချသူ
Disk Space ကိုသတ်မဲ့ဂစ်ဂါဘိုက်
အထက်ရှိ cPanel Reseller အကောင့်အသစ်များ၏
အထက်ရှိ cPanel WHM + ဖြင့်ထို Reseller ပေးတဲ့စီမံခန့်ခွဲရန်
Unlimited domains များ
Unlimited က MySQL Database ကို
Unlimited တယောက်က FTP အကောင့်အသစ်များ၏
ပုဂ္ဂလိက Name ကို Server များ
အခမဲ့ဒိုမိန်း Reseller အကောင့်
Softaculous script များ 396
အခမဲ့ SSL ကိုဆိုက် Reseller ပေးတဲ့
လူအပေါင်းတို့သည်အထက်ရှိ cPanel နှင့် WHM မှလုံခြုံ access ကို https://sdns.pw:2087
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ plug-in ကိုအတူအကောင့် hosting အခြားကုမ္ပဏီဖောက်သည်ကိုယူခဲ့
PHP ကို 5.4 Options ကို / တစ် /7.2
ရက်ပေါင်း7အဘို့စမ်းသပ်
Reseller အထက်ရှိ cPanel + WHM အကောင့်အသစ်များ၏
အထက်ရှိ cPanel + WHM + ZAMFOO အတူ Reseller ပေးတဲ့စီမံခန့်ခွဲရန်
alpha ပြန်လည်ရောင်းချသူ လက်ခံဆောင်ရွက်ရေး
အထက်ရှိ cPanel Reseller + WHM + မဟာအကောင့်
စူပါအာလဖ လက်ခံဆောင်ရွက်ရေး ပြန်လည်ရောင်းချသူ
အထက်ရှိ cPanel Reseller + WHM + မဟာ + အာလဖအကောင့်
ကျနော်တို့ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းထက် သာ. ကောင်း၏ပြောနိုင်
ကျနော်တို့ကဒီလိုမုန်းထားခြင်းမရှိဘဲနောက်ဆက်တွဲများအတွက်စည်းကမ်းချက်များသည်အထိအသုံးပြုသူဒီအသုံးအနှုန်းအာမခံငွေအကောင့်ကိုလက်ခံမပါဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့ရဲ့စနစ်ကအားလုံးစနစ်ပေါ်တွင်မူတည် spam များကိုအီးမေးလ်ကိုခွင့်ပြုမထားဘူးလုပ်ကိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်မည်သူမျှအဘို့အအတတျနိုငျဆုံး
ကျွန်ုပ်တို့၏ backup စနစ်နှင့် 24 နာရီ 24 လုပ်
417 ဇာတ်ညွှန်းနှင့်အတူအလိုအလျောက်estalação script ကို
အားလုံးဖောက်သည်များအတွက်အခမဲ့ SSL ကို
ဖောက်သည်သင့်ရဲ့ဖောက်သည် Reseller Reseller ပေးတဲ့များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူပြန်လည်ရောင်းချသူများ4အမျိုးအစားများ
site ကိုများအတွက် script CloudLinux အရင်းအမြစ် controller ကို
ဆိုက်ကိုထုတ်ဝေသူကိုသင်လျင်မြန်စွာရရှိနိုင်မော်ဒယ်များအစုတခုကနေ site တစ်ခုဖန်တီးရန်ဤ interface ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ website ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်နေချိန်မှာဒီဧည့်သည်အချို့အခြေခံအချက်အလက်တွေကိုမြင်တွေ့ခွင့်ပြုပါတယ်။
cPainel နှင့်အရှိဆုံးပြည့်စုံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ hosting အတွက် panel ကို၏ WHM တဦးတည်း
VPS Server ကို
2006 - 2017 - All Rights Reserved , LTD Hosting HdRede CNPJ/20.942.966/0001-55